တရုတ် Renault ကအန်းဒရွိုက်ကား DVD, Renault ကအန်းဒရွိုက် 4.4 ကား DVD, Renault ကအန်းဒရွိုက် 5.1 ကား DVD ထုတ်လုပ်သူ
ဖေါ်ပြချက်:Renault ကအန်းဒရွိုက်ကား DVD,Renault ကအန်းဒရွိုက် 4.4 ကား DVD,Renault ကအန်းဒရွိုက် 5.1 ကား DVD,Renault က Android 6.0.1 မော်တော်ကား DVD,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > Renault ကအန်းဒရွိုက်ကား DVD
Renault ကအန်းဒရွိုက်ကား DVD ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, Renault ကအန်းဒရွိုက်ကား DVD, Renault ကအန်းဒရွိုက် 4.4 ကား DVD ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, Renault ကအန်းဒရွိုက် 5.1 ကား DVD R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
Logan Sandero Duster အတွက် Android ကားစတီရီယို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Clio 2016 အတွက်ကားစတီရီယိုဆက်စပ်ပစ္စည်းများ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Renault Megane3Android 9.0 Headunit GPS  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Duster 2012-2013 အတွက် Renault Android ကား DVD ကို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
၂၀၁၄ Kadjar အတွက် Android 8.1 OS Multimedia Player  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Android 8.1 OS Multimedia Player ကို ၂၀၁၆ တွင်ဖမ်းယူသည်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Octa Core 32G ရေဒီယို GPS Capture MT 2016  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Sandero Duster အတွက် Octa Core 4GB RAM Navigation  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Renault Duster အတွက်ကား DVD ကစားသမား  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Renault Fluence III အတွက် Android 6.0 Car DVD  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
renault megane2autoradio  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Octa Core Android 6.0 DVD Renault Fluence III  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Android 6.0 Octa Core Renault Megane2 အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Kadjar 2016 အတွက်9လက်မ Full Touch  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Duster အတွက် Renault 1080p DVD player ဖြစ်သည်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Duster 2015 မာလ်တီမီဒီယာပလေယာ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Renault Duster 2015-2020 အတွက် Android ကားစတီရီယို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Capture အဘို့အ octa-core ကားတစ်စီးအော်တိုမာလ်တီမီဒီယာ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Duster များအတွက် Android မှာ 9.0 ကားတစ်စီး DVD player  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
2016 ကားတစ်စီးမာလ်တီမီဒီယာဟာ android ကို AT Capture  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Capture 2016 အတွက်ရေကြောင်းစနစ်ပါသောမာလ်တီမီဒီယာ သင်၏ဖုန်း၏အွန်လိုင်း GPS ကိုဤ Capture 2016 မော်တော်ယာဉ် gps လမ်းညွှန် တွင်ထင်ဟပ်ပြသပြီးအညွှန်းအလားအလာကိုပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက်ဤလုပ်ဆောင်မှုသည်အလွယ်ကူဆုံးဖြစ်သည်။ Android ဖုန်းအတွက်...
Logan Sandero Duster အတွက် Android ကားစတီရီယို
Logan Sandero Duster အတွက် Android ကားစတီရီယို ကျနော်တို့ Logan ဘို့ငါတို့2din ဟာ android ရေဒီယိုမှာဘာရှိသနည်း ၁။ Logan အတွက်ဒီယူနစ်2dinroid ရေဒီယိုဖြင့် BT မှအင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုကိုသင်ခံစားနိုင်သည်။ ပထမ ဦး စွာ Logan အတွက် သင့် iPhone သို့မဟုတ်...
Clio 2016 အတွက်ကားစတီရီယိုဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
Clio 2016 အတွက်ကားစတီရီယိုဆက်စပ်ပစ္စည်းများ Clio 2016 အတွက်နောက်ဆုံးပေါ် Android 9.0 ကားစတီရီယိုဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, Mazda3အတွက် Plug & Play Car Radio (2009-2012) အတွက်။ APPs များပိုမိုတပ်ဆင်ရန်အတွက် 4GB RAM နှင့် Octa Core CPU၊ 32GB ROM...
Renault Megane3Android 9.0 Headunit GPS ဒီယူနစ် Renault Megane3Android Headunit သည်သင်၏စမတ်ဖုန်းကို hotspot ဖန်တီးရန်နှင့် Wi-Fi ရောက်တာ (သို့) 4G dongle ကိုဝယ်ယူသည်။ အင်တာနက်သုံးရန်နည်းလမ်းများစွာ အွန်လိုင်းရုပ်ရှင်များကြည့်ခြင်း၊...
Duster 2012-2013 အတွက် Renault Android ကား DVD ကို
Duster 2012-2013 အတွက် Renault Android ကား DVD ကို Wi-Fi ပါ ၀ င်သော Duster အတွက် Renault Android Car DVD သည်ပိုမိုမြန်ဆန်သော LTE ဒေါင်းလုပ်အမြန်နှုန်းနှင့်သင်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုအင်တာနက်ကိုပိုမိုအသုံးပြုခွင့်ပြုသည်။ RDS ဖွင့်ထားသောပါ ၀ င်သည့်ရေဒီယို...
၂၀၁၄ Kadjar အတွက် Android 8.1 OS Multimedia Player
၂၀၁၄ Kadjar အတွက် Android 8.1 OS Multimedia Player 1, 3D Navigation: Kadjar 2016 အတွက် Android 8.1 OS မာလ်တီမီဒီယာပလေယာကားစတီရီယိုသည်တိကျမှန်ကန်သောကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိအချိန်နှင့်တပြေးညီလမ်းညွှန်စနစ်တပ်ဆင်ထားသည်။ လက်ရှိတည်နေရာ၊ အမြန်နှုန်း၊...
Android 8.1 OS Multimedia Player ကို ၂၀၁၆ တွင်ဖမ်းယူသည်
Android 8.1 OS Multimedia Player ကို ၂၀၁၆ တွင်ဖမ်းယူသည် 1, 3D Navigation: ကားစတီရီယိုသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိအချိန်နှင့်တပြေးညီလမ်းညွှန်မှုမြင့်မားသောတိကျမှန်ကန်မှုကိုတပ်ဆင်ထားသည်။ လက်ရှိတည်နေရာ၊ အမြန်နှုန်း၊ မိုင်အကွာအဝေး၊ အထင်ကရအဆောက်အအုံ၏ပြသမှု၊ 3D...
Octa Core 32G ရေဒီယို GPS Capture MT 2016
Octa Core 32G ရေဒီယို GPS Capture MT 2016 1, 3D Navigation: ကားစတီရီယိုသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိအချိန်နှင့်တပြေးညီလမ်းညွှန်မှုမြင့်မားသောတိကျမှန်ကန်မှုကိုတပ်ဆင်ထားသည်။ Octa Core 32G ရေဒီယို GPS Capture MT 2016 လက်ရှိတည်နေရာ၊ အမြန်နှုန်း၊ မိုင်အကွာအဝေး၊...
Sandero Duster အတွက် Octa Core 4GB RAM Navigation
Sandero Duster အတွက် Octa Core 4GB RAM Navigation 1, 3D Navigation: ကားစတီရီယိုသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိအချိန်နှင့်တပြေးညီလမ်းညွှန်မှုမြင့်မားသောတိကျမှန်ကန်မှုကိုတပ်ဆင်ထားသည်။ လက်ရှိတည်နေရာ၊ အမြန်နှုန်း၊ မိုင်အကွာအဝေး၊ အထင်ကရအဆောက်အအုံ၏ပြသမှု၊ 3D...
Renault Duster အတွက်ကား DVD ကစားသမား
ထုပ်ပိုး: 3.5KGS / Set 26.5 * 26 * 18.5CM / လက်ဆောင်သေတ္တာ
Renault Duster အတွက်ကား DVD ကစားသမား ၁။ Renault Duster အတွက်ကား DVD ကစားသမား Car DVD Player ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းတွင်အတွေ့အကြုံ ၇ နှစ်ရှိသည့် Car DVD Player နှင့် android အပါအ ၀ င်ဂျပန်၊ ရုရှား၊ ယူကရိန်း၊ တူရကီ၊ စပိန်၊...
Renault Fluence III အတွက် Android 6.0 Car DVD
Renault Fluence III အတွက် Android 6.0 Car DVD ၁ ။7'' မျက်နှာပြင် resolution 1024x600, capacitive touch screen, multi-touch ၂ တပ်ဆင်ထားသည့် Play Market
renault megane2autoradio 1. renault megane2autoradio များအတွက် HD ကိုမျက်နှာပြင် Android ကား DVD ကို။ ရေဒီယို sensitivity ချိန်ညှိမှုသည်မြင့်မားပြီးအသံတစ်ခုကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်၊ စားပွဲဝိုင်းသည်မရှင်းလင်းပေ။ သို့သော် sensitivity နည်းပါက၊...
Renault Fluence III အတွက် Octa Core Android 6.0 Car DVD GPS မျက်နှာပြင်: မျက်နှာပြင် resolution 1024x600, capacitive touch screen, multi-touch 5...
Android 6.0 Octa Core Renault Megane2၁။ ကားကိုအပြီးသတ်လျှင်အမြန်တုန့်ပြန်မှု - ၁ စက္ကန့်အတွင်းစတင်ရန်၊ အသံအတွက် ၂ စက္ကန့်အတွင်း၊ နောက်ကြည့် ၃ စက္ကန့် အတွင်း ၊ APE Music ကိုတပ်ဆင်သည့်အခါများစွာသောလျှောက်လွှာများလုပ်ငန်းလည်ပတ်ရန် ၂၅ စက္ကန့်အတွင်း။...
Kadjar 2016 အတွက်9လက်မ Full Touch
Supply နိုင်ခြင်း: 3500000pieces/year
Kadjar 2016 အတွက်9လက်မ Full Touch ၁။ Kadjar 2016 အတွက် ၉ လက်မ Full Touch သည် ၉ လက်မအကျယ်ကင်းသော DVD player ဖြစ်သည်။9လက်မ Full Touch Kadjar 2016 အတွက်အဓိကအား 2016 Renault Kadjar ကိုအသုံးပြုသည်။ mirror-link လုပ်ဆောင်ချက်နှင့်အတူ၊...
Duster အတွက် Renault 1080p DVD player ဖြစ်သည်
Duster အတွက် Renault 1080p DVD player ဖြစ်သည် ၁။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Renault KD-8308 ကား DVD Car DVD Player ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းတွင်အတွေ့အကြုံ ၇ နှစ်ရှိသည့် Car DVD Player အပါအ ၀ င် android နှင့် wince Car DVD အပါအ ၀...
Duster 2015 မာလ်တီမီဒီယာပလေယာ
ထုပ်ပိုး: GIFT BOX + CARTOX BOX
Renault Duster 2015-2020 အတွက် Android9PX5 octa core head ဖြစ်သည် ၁) အရည်အသွေးမြင့်သောရေဒီယို IC: NXP TEF6686၊ Built-in TDA7851 အသံချဲ့စက် IC; subwoofer audio output ကို Support လုပ်ပြီးသီးခြားစီထိန်းချုပ်ပါ။ မျက်နှာပြင် resolution: 1024 * 600;...
Renault Duster 2015-2020 အတွက် Android ကားစတီရီယို
Capture အဘို့အ octa-core ကားတစ်စီးအော်တိုမာလ်တီမီဒီယာ
Capture အဘို့အ octa-core ကားတစ်စီးအော်တိုမာလ်တီမီဒီယာ 2009 ခုနှစ်တွင် 1.established, Shenzhen klyde အီလက်ထရွန်းနစ် co ။ , ltd, ဖွံ့ဖြိုးဆဲထုတ်လုပ်မှုနှင့်ကားတစ်စီးအသံများနှင့်ကားကိုဗီဒီယိုကထုတ်ကုန်ရောင်းချခြင်းအတွက်အထူးပြုတဲ့ professional...
Duster များအတွက် Android မှာ 9.0 ကားတစ်စီး DVD player
Duster များအတွက် Android မှာ 9.0 ကားတစ်စီး DVD player 1.3D Navigation: အဆိုပါကားတစ်စီးစတီရီယိုမြင့်မားသောတိကျမှန်ကန်မှု၏ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကို real-time အညွှန်း function ကိုတပ်ဆင်ထားသည်။ လက်ရှိတည်နေရာ, အမြန်နှုန်းမိုင်အကွာအဝေး, မြေမှတ်တိုင်အဆောက်အဦး...
2016 ကားတစ်စီးမာလ်တီမီဒီယာဟာ android ကို AT Capture
2016 ကားတစ်စီးမာလ်တီမီဒီယာဟာ android ကို AT Capture 1, 3D Navigation: အဆိုပါကားတစ်စီးစတီရီယိုမြင့်မားသောတိကျမှန်ကန်မှု၏ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကို real-time အညွှန်း function ကိုနှင့်အတူ 2016 ကားတစ်စီးမာလ်တီမီဒီယာဟာ android ကို AT Capture အတပ်ဆင်ထားသည်။...
တရုတ်နိုင်ငံ Renault ကအန်းဒရွိုက်ကား DVD ပေးသွင်း
အန်းဒရွိုက် 6.0.1 စနစ်, တိမ်း, ဘေးကင်းလုံခြုံမှု, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နှင့်အခြားဝိသေသလက္ခဏာများ, မော်တော်ကားအသံနှင့်စမတ်စနစ်အပေါ်အခြေခံပြီး 1. Renault ကအန်းဒရွိုက်ကား DVD navigation system ကို။
2. သင်က DVD ကို CANBUS နှင့်အတူရန်အတွက်လေ့ကျင့်သင်ကြားလျှင် link.You စတီယာရင်ဘီးထိန်းချုပ်မှုခလုတ်အားဖြင့်ကားကိုမာလ်တီမီဒီယာကစားသမားထိန်းချုပ်နိုင်သည်မှန်နှင့်အတူ Renault ကအန်းဒရွိုက် 4.4 ကား DVD (1 din ကားတစ်စီး DVD) မှကြိုးမဲ့ဂီတပြန်ဖွင့်ကိုခံစားနိုင်ပါတယ်။ အပြင်သင်သည်လည်းထိုသူတို့ CANBUS မပါဘဲကားစတီရီယိုထိန်းချုပ်ဖို့သင်ယူနိုင်ပါတယ်။
3. Renault ကအန်းဒရွိုက် 5.1 ကား DVD, သတင်းအချက်အလက်နိုင်ရန်အတွက်ပြသနိုင်ဖို့ကပိုဖွယ်ရှိသည်, မျက်နှာပြင်စက်ကိုပိုပြီးအရည်စေရန်စက်တင်ဆောင်ပိုပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်း, အသိဉာဏ်စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်, မျက်နှာပြင်ကိုလည်းပိုမိုမြင့်မားတဲ့ resolution ရှိပြီးယင်းနှင့်အတူပိုပြီးစိတ်ကျေနပ်မှုဖြစ်ပါတယ် ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့သကဲ့သို့ဝယ်ယူ, ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်မဆက်ဆံနိုင်ပါရှေ့တော်၌ထိုမော်ဒယ်များပေါ် မူတည်. အသုံးပြုသူ, အညွှန်းများ၏လျှောက်လွှာကိုအထူး features တွေနှင့်အတူလည်းကွဲပြားခြားနားသည်လည်းကွဲပြားခြားနားသည်။ ဒါဟာအလွန်ကောင်းသောကားတစ်စီး DVD player ဖြစ်ပါတယ်။
Renault ကအန်းဒရွိုက်ကား DVD Renault ကအန်းဒရွိုက် 4.4 ကား DVD Renault ကအန်းဒရွိုက် 5.1 ကား DVD Renault က Android 6.0.1 မော်တော်ကား DVD Renault ကအန်းဒရွိုက်ကားကို DVD